Apple yakaburitsa beta yechinomwe yewatchOS 5 uye tvOS 12 yevagadziri | Ndinobva mac
Apple inoenderera ichisunungura mabetas matsva ezve anozove masisitimu emidziyo iyo ichagadziriswa munaGunyana. Mune ino kesi, yaive nguva ye beta 7 ye WatchOS 5 uye tvOS 7 beta 12. Apple yakaburitsa beta yechinomwe yewatchOS 5 yevagadziri. Iyo yekuvaka nhamba iyo yakaverengerwa ne16R5349a.
Kune chikamu chayo, beta 7 ye tvOS 12 ine yekuvaka nhamba 16J5349a.
Kufanana neMuvhuro wega wega, Apple yakatishandisa kutanga mabhesa matsva ehurongwa huchauya. Iine TVOS 12, Apple TV 4K ichave yega yekumhanyisa mutambi akasimbiswa neese Dolby Vision uye Dolby Atmos, achiendesa yakakwira mhando yemafirimu chiitiko ine inoshamisa 4K HDR mifananidzo uye kutenderera kurira. ichiyerera yakatenderera munzvimbo-mativi matatu
watchOS 5 yechikamu chayo, ichaunza chinhu chitsva cheWalkie-Talkie, makwikwi ezviitiko, otomatiki kudzidziswa kuona, podcast nezvimwe. Apple Watch iri kuramba ichiita shamwari yakasimba kune avo vanoona kwavo kugwinya, kutaurirana uye nekukurumidza kuwana ruzivo neakawanda ezve maficha anosanganisira akagovaniswa zviitiko zvemitambo, otomatiki kudzidziswa kuona, epamberi mabasa ekumhanya, Walkie-Talkie, Apple podcasts uye yechitatu-bato maapplication pane iyo Siri kumeso kutaridzika.
Pasina mubvunzo, munaGunyana panounzwa iyo iPhone nyowani uye ndiani anoziva kana iyo Apple Watch Series 4, isu tichaenda kune imwe yenguva uko maApple kifaa masisitimu anozove nematurusi akawanda uye zvinoshandiswa kupfuura nakare kose.
Kana iwe uri mugadziri weaya masisitimu iwe unogona ikozvino kurodha aya mabheji uye wotanga kuferefeta ingangoitika nhau dzavanadzo pasi pehodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple yakaburitsa beta yechinomwe yewatchOS 5 uye tvOS 12 yevagadziri
MacOS Mojave beta 7 yakaburitswa yevanogadzira
Chinja zvirinani mavhidhiyo kuGIF neVhidhiyo GIF Musiki